Falanqeyn kusaabsan kulanka cawada ee Barcelona iyo Valencia
Tababaraha kooxda Blaugrana ayaa guuldaradii ugu horeysay ay ka soo gaartay arbacadii Real Madrid, waxaana uu doonayaa inuu kooxdiisa wadada guusha ku soo celiyo kulanka ay Valencia soo booqaneyso caawa Camp Nou, inkastoo uu isaga ganaax kaga maqnaan doono kursiga keydka.
Kabtanka kooxda Barcelona Carles Puyol ayaa shaki uu ku jiraa inuu ciyaari karo kulanka caawa ee Valencia isagoo weli la dhibtoonaya dhaawac daanka ah.
Kooxda Catalans oo uu ganaax kaga maqnaan doono tababarahooda Tito Vilanova ayaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu ka maqnaado daafaca midig Dani Alves, ciyaaryahanka reer Brazil ayaa dhaawac uu soo gaaray ka hor kulankii Super Copa ee guuldarada ay ka soo gaartay Real Madrid.
Si kastaba, ciyaaryahanka khadka dhexe Thiago ayaa ugu danbeyn ka soo kabsaday dhaawacii u diiday inuu ciyaaro ciyaarihii Olimbikada, waxaana uu haatan taam u yahay inuu ciyaaro.
Dhanka Valencia ciyaaryahanka ay xagaagan la soo wareegeen Fernando Gago ayaa mari doona tijaabo caafimaad maanta, sidaasi darteed David Albelda ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro kulankiisii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan.
Sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu ku soo bilowdo daafaca reer France Adil Rami, kaasoo bedeli doona Ricardo Costa oo ganaax ku maqan.
Guuldaradii Barcelona ee Supercopa ee ka soo gaartay Real Madrid ayaa aheyd guuldaradii ugu horeysay ee iyagoo marti ah tan iyo markii Chelsea ay 1-0 kaga badisay xilli ciyaareedkii hore lugtii hore ee semi-finalkii Champions League.
Kooxda Catalans ayaa ku jirta Group G Champions League iyagoo wajihi doona xilli ciyaareedkan Benfica, Spartak Moscow iyo Celtic.
Lionel Messi ayaa ku socda wadadii gooldhalinta ee xilli ciyaareedkii hore ka dib afar kulan oo uu saftay tartamada oo dhan waxa uu dhaliyay lix gool.
Valencia ayaa ku guuldareysatay inay guul ka gaarto Barcelona 11kii kulan ee ugu danbeeyay ee tartamada oo dhan.
Guushii ugu danbeysay ee kooxda Los Che ay ku gaarto Camp Nou waxa ay aheyd 1-0 oo ay ku badiyeen October 2003dii, oo ah xilligii ugu danbeysay ee ay horyaalka ku guuleystaan.
Valencia ayaa ku jirta Group F Champions League, iyagoo la ciyaari doona Bayern Munich, Lille iyo BATE Borisov.